အနေအေးတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ချစ်ဇနီးအပေါ်မှာတော့ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု - Cele Connections
အနေအေးတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ချစ်ဇနီးအပေါ်မှာတော့ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
16/10/2020 By bilie Celebrity
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးကတော့ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာခြင်း တူသူတွေမို့ ဝါသနာပါရာအလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းကို အတူ လျှောက်လှမ်းနေကြတာပါ။ အိမ်ထောင်သက် (၂) နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အခုချိန်ထိ ရင်သွေးရတနာမယူဖြစ်သေးပဲ ကိုယ်စီအလုပ်တွေကိုသာ အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သွက်သွက်လက်လက်နေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာဏကြီးကတော့ အနေအထိုင်အေးဆေးလွန်းတာကြောင့် ပိုင်ဖြိုးသုက “ဦးရေခဲကြီး” လို့တောင် ခေါ်ဆိုရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက အနေအေးတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဏကြီးအကြောင်းကို “ရှိတယ်….ရှိတယ်…..လင်မယားအရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးအချင်းချင်း သူ့ကို Congratulationsမလုပ်လို့ရွှေစိတ်တော်ညိုတဲ့ ဦးဘုဂလန့်ဂွစာသောင်းသောင်းကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ရည်းစားဘဝ ကတည်းကဒီကပေါက်ကျော်မက “ကိုကို…ခေးကလေ အဟင့်အဟင့်”တွေလုပ်ပြီးမချွဲတတ်တာသိရက်နဲ့သူပဲယူထားပြီး အခုမှ” Congratulations Babyyyyyy….. I’m sooooo proud of u အဟင့်အဟင့်” လို့ပြောပါ့မလားဦးဏကြီးစိတ်ပုပ်ကြီးရဲ့…. မသိဘူး….ရှင်ကောက်တာထက်ကျွန်မက၁၀ဆပြန်ကောက်တယ်….အဲဒါရှင်ပြန်ချော့….ဒါဘဲ…..ဂွပ်” ဆိုပြီး ချစ်စဖွယ် ပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဒါရိုက်တာဏကြီးထက် အသက် (၈) နှစ်လောက် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းအပေါ် ကလေးဆိုးလေးတစ်ယောက်လို ဆိုးနွဲ့တတ်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း အနေအေးပေမယ့် ချစ်ဇနီးအပေါ်မှာတော့ နွဲ့ဆိုးဆိုးတတ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Paing Phyo Thu’s fb
အနအေေးတယျလို့ထငျရပမေယျ့ ခဈြဇနီးအပျေါမှာတော့ စိတျကောကျတတျတဲ့ ဒါရိုကျတာဏကွီးအကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
ဒါရိုကျတာ ဏကွီးနဲ့ သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသုတို့ ဇနီးမောငျနှံ နှဈဦးကတော့ အနုပညာကို ခဈြမွတျနိုးကွတာခွငျး တူသူတှမေို့ ဝါသနာပါရာအလုပျတှကေို အကောငျးဆုံးကွိုးစားပွီး ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အခဈြခရီးလမျးကို အတူ လြှောကျလှမျးနကွေတာပါ။ အိမျထောငျသကျ (၂) နီးပါးရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ပိုငျဖွိုးသုနဲ့ ဏကွီးတို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ အခုခြိနျထိ ရငျသှေးရတနာမယူဖွဈသေးပဲ ကိုယျစီအလုပျတှကေိုသာ အားသှနျခှနျစိုကျလုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သှကျသှကျလကျလကျနတေတျသူတဈယောကျဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာဏကွီးကတော့ အနအေထိုငျအေးဆေးလှနျးတာကွောငျ့ ပိုငျဖွိုးသုက “ဦးရခေဲကွီး” လို့တောငျ ချေါဆိုရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ပိုငျဖွိုးသုက အနအေေးတယျလို့ထငျရပမေယျ့ စိတျကောကျတတျတဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဏကွီးအကွောငျးကို “ရှိတယျ….ရှိတယျ…..လငျမယားအရငျးခေါကျခေါကျကွီးအခငျြးခငျြး သူ့ကို Congratulationsမလုပျလို့ရှစေိတျတျောညိုတဲ့ ဦးဘုဂလနျ့ဂှစာသောငျးသောငျးကွီးတဈယောကျရှိတယျ။ ရညျးစားဘဝ ကတညျးကဒီကပေါကျကြျောမက “ကိုကို…ခေးကလေ အဟငျ့အဟငျ့”တှလေုပျပွီးမခြှဲတတျတာသိရကျနဲ့သူပဲယူထားပွီး အခုမှ” Congratulations Babyyyyyy….. I’m sooooo proud of u အဟငျ့အဟငျ့” လို့ပွောပါ့မလားဦးဏကွီးစိတျပုပျကွီးရဲ့…. မသိဘူး….ရှငျကောကျတာထကျကြှနျမက၁၀ဆပွနျကောကျတယျ….အဲဒါရှငျပွနျခြော့….ဒါဘဲ…..ဂှပျ” ဆိုပွီး ခဈြစဖှယျ ပွောလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ ဒါရိုကျတာဏကွီးထကျ အသကျ (၈) နှဈလောကျ ငယျရှယျသူဖွဈပွီး ခငျပှနျးအပျေါ ကလေးဆိုးလေးတဈယောကျလို ဆိုးနှဲ့တတျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး အနအေေးပမေယျ့ ခဈြဇနီးအပျေါမှာတော့ နှဲ့ဆိုးဆိုးတတျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
အဆိုတော် မီးမီးခဲ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားလာတဲ့ ထူးအယ်လင်း
ကင်ဆာရောဂါကို မတွန်းလှန်နိုင်တော့ပဲ ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားတဲ့ မီးမီးခဲအတွက် စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းကြောင်းပြောလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်